लकडाउनमा के–के गर्दैछन् सेयर लगानीकर्ता नेताहरु ? Bizshala -
लकडाउनमा के–के गर्दैछन् सेयर लगानीकर्ता नेताहरु ?
काठमाण्डौ। कोरोनाभाइरसको महामारीले विश्वमै आतंक मच्चाइरहेका बेला नेपाल पनि हिजो मंगलबारबाट एक साता लामो लकडाउन गरिएको छ।
धितोपत्र बजारसमेत गत सोमबारबाटै बन्द भएपछि सेयर लगानीकर्ताका नेताहरु होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। लगानीकर्ताका नेताहरुको दिनचर्या र सेल्फ क्वारेन्टनमा कसरी बिताइरहेका छन् त। लकडाउनको फुर्सदिलो समयलाई कसरी सदुुपयोग गरिरहेका छन् ?
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष तुुलसीराम ढकाल हाल बसुुन्धरा धापासीमा बसोबास गर्छन्। ढकाल होम क्वारेन्टाइनमा नै सपरिवार बसिरहेका बताउँछन्। साथीभाइलाई फोनसम्पर्क गरेर सम्पर्क गरिरहेको बताउने उनी स्वास्थ्यमा सजग हुुन घरबाहिर ननिस्कने बताए।
कोरोना भाइरसले मनस्थिति बिग्रेर लेखपढमा ध्यानै जान नसकिरहेको उल्लेख गर्दै ढकाल हाल केबल न्यूूज अपडेटमात्र हेरिरहेको जिकिर गर्छन्। कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न स्वास्थ्यमा सजग हुुँदै घरपरिवारसँग बस्न उनले आम लगानीकर्तालाई आग्रहसमेत गरे।
विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको विषम परिस्थितिमा ढकालले सबैमा सुस्वास्थ्यको शुभकामना दिए।
सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल मुलुकले लकडाउन घोषणा गरेपछि घरमा परिवारसँगै बसेको बताए। उनी हाल काठमाण्डौको कलंकीमा बसोबास गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, आर्थिक गतिविधिबारे मिडियाबाट जानकारी लिँदै अध्ययन गरिरहेको उनले सुनाए।
कोरोनाभाइरसको अपडेट पनि लिँदै स्वअनुशासनमा समय व्यतीत गरिरहेको अर्यालले जिकिर गरे। राष्ट्रसँग हातेमालो गर्दै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको उनको दाबी छ। सबै लगानीकर्तालाई उनले स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दै घरबाहिर ननिस्कन आग्रहसमेत गरेका छन्। कोरोनाविरुद्ध लड्न राज्यलाई सफल बनाउन नागरिकले सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
नर्सरी र करेसाबारीमा आफूलाई व्यस्त राखेकी सुन्दर नेतृ अर्थात् नेपाल पूूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल घरको सरसफाइमा अभ्यस्त भएको बताउँछिन्। उनी काठमाण्डौको मण्डिखाटारस्थित एकतावस्तीमा बसोबास गर्दछिन्।
पोखरेलले कोरोनाविरुद्ध लड्ने राहत कोषमा ५५ हजार ५ सय ५५रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा पनि गरिन्। वृद्ध आमाबुवाको रेखदेख र हेरचाह गर्दै दिनचर्या बिताइरहेकी उनी लेखपढमा पनि रमाइरहेकी छन्। आँखामा जापान, सत्मार्ग, गुुलाबी उमेर, प्रतिरोध, संस्कृति समीक्षा र सौन्दर्य, २१ औं शताब्दीका प्रमिथसहरु उनले हाल अध्ययन गरिरहेका पुस्तक रहेछन्।
कोरोना भाइरससँग लडिरहेका आम नेपालीहरुलाई सुरक्षा र सतर्कता अपनाउन पोखरेलले आग्रह गरेकी छन्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सरकारलाई सहयोग गर्न उनले जोड दिइन्। ‘आफू बचौँ र अरुलाई बचाऔँ’, उनले भनिन्।
सेयर बाजारमा निकै क्रान्तिकारी छवि बनाएका र निकै जोशिला नेताका रुपमा परिचित लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल अध्ययन र ध्यानमा मग्न भएको बताउँछन्। उनी हाल काठमाण्डौ पेप्सीकोलामा बस्छन्। घरबाहिर ननिस्किकन सरकारलाई लकडाउनमा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।
अष्टावक्र गीता र सी चिनफिङ चीनको शासन व्यवस्थालगायतका पुस्तकहरु अध्ययन गरिरहेको ढकालले जिकिर गरे। कोरोनाभाइरसको भय र त्रास हटाइ योग ध्यानमा केन्द्रित भई दिनचर्या बिताइरहेका ढकाल सरकारले लागूू गरेको लकडाउनको पालना कडाइका साथ पालना गर्न लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्छन्। ‘अहिले अनुशासन नै हतियार हो’, उनले भने।
अति आवश्यक परेमात्र बाहिर निस्कन ढकालको सुझाव छ। घरमै बसेर इन्टरनेटमा ज्ञान आर्जन गर्न उनले सुझाए। फुुर्सदमा योग साधना गर्न सुझाउँदै उनले सम्पूर्णमा धैर्य भई नआत्तिन अनुरोधसमेत गरे।
सेयर बजारसँग सम्बन्धित फिल्म र रविन्द्र भट्टराईका पुस्तकहरु पढ्दै लकडाउनमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेकी नेपाल पूूँजीबजार संघकी अध्यक्ष संरक्षणा चौधरी काठमाण्डौ कलंकीमा परिवारका साथ बसिरहेकी छन्। सूचीकृत कम्पनीहरुको त्रैमासिक विवरणहरुको तुुलनात्मक अध्ययनसमेत गर्दै उनले मीठामीठा परिकारहरु पकाउँदै खुवाउँदै खाँदै बसेको बताउँछिन्।
गुलाबी उमेर,चिना हराएको मान्छे लगायतका उपन्यासहरु पढ्दै होम क्वारेन्टाइनमा नै बसेकी उनी आम लगानीकर्तालाई लकडाउनको समयमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित पुस्तक र फिल्म हेर्न जोड दिएकी छन्।
share market leaders